पिसाबमा प्रोटिनले डा. केसीको मिर्गौलामा असर पुगेको आशंका, अस्पतालले रेफरको गुहार लगाउँदा भएन सुनुवाइ – Health Post Nepal
२०७६ कार्तिक २४ गते १९:४७
कति साहसी डा. केसी, लत्रिएको शरीरमा धिपधिपाउँदो ‘ऊर्जा’
१७औँ सत्याग्रह सुरु गर्न डा. केसी डडेल्धुरामा, अनशन बस्नुअघि स्वास्थ्यपरीक्षण जारी
१७औँ अनशनको सातौँ दिन डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्यअवस्था निकै गम्भीर बनेको छ । अनशनको पाँचौँ दिन स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि शुक्रबार डडेल्धुरा अस्पताल सारिएका डा. केसीको पिसाबको परीक्षणमा प्रोटिन गएको देखिएको छ । यससँगै उनको मिर्गौलामा खराबी आएको आशंका उपचारमा संलग्न चिकित्सकले गरेका छन् । अस्पतालले डा. केसीलाई थप उपचार दिन अस्पतालको सामर्थ्यले नधान्ने भन्दै यथाशीघ्र सुविधासम्पन्न अस्पतालमा रेफर गर्न सम्बन्धित सबै निकायसित अनुरोध गरिसकेको छ । तर, कुनै पनि जिम्मेवार निकायबाट कुनै पहल भएको छैन ।
‘आइतबारको परीक्षणमा पिसाबमा ‘एल्बुमिन ट्रेस’ देखिएको छ । यसले सरको किड्नीमा खराबी आएको आशंका जन्माएको छ,’ अस्पतालका निमित्तमेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. जितेन्द्र कँडेलले हेल्थपोस्टसित भने, ‘मैले उहाँको स्वास्थ्यअवस्था र थप उपचारबारे स्वास्थ्य मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायत निकायलाई लिखित रुपमै जानकारी पठाएको छु, तर रेफरको वातावरण मिल्न सकिरहेको छैन ।’ मन्त्रालय वा अन्य सरकारी निकायबाट भने हालसम्म डा. केसीको स्वास्थ्यअवस्थाबारे कुनै सोधनीसमेत नभएको उनले बताए ।
मेसु कँडेलका अनुसार डा. केसीको रक्तचाप र मुटुको धडकन अनियमित छ । अस्पतालमा आइसियू, जनशक्ति, उपकरणलगायत कुनै पनि सुविधा उपलब्ध नभएकाले डा. केसीको स्वास्थ्यसित अस्पतालले थप जोखिम लिन सक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकारमागहतको डडेल्धुरा अस्पतालमा ओपिडी, एक्सरे, भिडियो एक्सरे, समान्य शल्यक्रियालगायत सेवा मात्र उपलब्ध छन् ।
‘उहाँलाई सुविधासम्पन्न अस्पतालमा राखेर उपचार गर्नु आवश्यक छ,’ डा. कँडेलले भने, ‘तर, त्यसका लागि पहल कसले गर्ने भन्ने समस्या छ ।’ एम्बुलेन्समा लामो बाटो हिँडाउन सक्ने अवस्था नरहेको र हवाईमार्गबाट पठाउन सम्बन्धित निकायले पहलकदमी नलिएको उनको भनाइ छ । यद्यपि, यसबारे आइतबार नै प्रमुख जिल्ला अधिकारीसित कुरा भएको उनले बताएका छन् । आफूले रेफर गर्दा नजिकको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा रेफर गर्नुपर्ने तर डा. केसीलाई काठमाडौं नै लानु आवश्यक देखिएको मेसु कँडेलले बताए ।
विगतका सत्याग्रहका क्रममा सरकारले आफूसित गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सम्झौताअनुसार राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐनमा संशोधन गरिनुपर्ने, दुर्गम क्षेत्रहरुमा सरकारी मेडिकल कलेज खोलिनुपर्ने, विद्यार्थीबाट अवैध शुल्क असुलेर ठगी गर्ने मेडिकल कलेजहरुलाई कारबाही गर्नुपर्नेलगायत विभिन्न सातबुँदे माग राखेर डा. केसीले गत सोमबार १७औँ सत्याग्रह सुरु गरेका थिए । आइओएमको २६ वर्षे चिकित्सकीय तथा प्राध्यापन सेवाबाट अवकाश भएपछिको पहिलो अनशनका लागि उनले सुदूरपश्चिमको डडेल्धुरा रोजेका थिए । सुदूरपश्चिममा सरकारी मेडिकल कलेजको माग उनले पहिलेदेखि नै उठाउँदै आएका छन् ।
Tags: १७औँ अनशन, डा.गोविन्द केसी